टेलिफोनको पहुँच बाहिर ४० स्थानीय तह - Samriddha Online
टेलिफोनको पहुँच बाहिर ४० स्थानीय तह
समृद्ध अनलाईन २९ आश्विन २०७७, बिहीबार ०८:४३ मा प्रकाशित ( ३ महिना अघि) १७५ पाठक संख्या
अर्जुनधारा, असोज २९ गते । प्रदेश १ को माथिल्लो सङ्खुवासभा, उदयपुर, खोटाङको सुनकोसी तथा सोलुखुम्वुका केही क्षेत्रमा नेपाल टेलिकमको टावर नहुँदा गाउँपालिका केन्द्र नै टेलिफोन र इन्टरनेटको पहुँचबाट टाढा रहेका छन् । एक नं. प्रदेशका केही गाउँपालिका सहित देशका ४० स्थानीय तहमा अझै पनि टेलिफोन र इन्टरनेट पहुँच पुगेका छैन ।
दुर्गम मानीएक एक नं. प्रदशेका केही गाउँपालिका सहित देशका ४० वटा गाउँपालिकाको केन्द्रमा टेलिफोन र इन्टरनेट पहुँच नपुग्दा स्थानीयतहका प्रशासनिक केन्द्रहरूमा कार्यलय संचालनमा समेतक कठिनाई भएको छ । सुदूरपश्चिमको बझाङ, दार्चुला र बाजुरा, कर्णाली प्रदेशका जाजरकोट र डोल्पा, लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वी रुकुम र पश्चिमी रोल्पाका स्थानीय तहमा यो समस्या रहँदै आएको छ ।
त्यस्तै गण्डकी प्रदेशको पश्चिमी बागलुङ र उत्तरी गोरखा, नेपाल टेलिकमको टावर नहुँदा टेलिफोन र इन्टरनेटको पहुँचबाट गाउँपालिकाहरू वञ्चित भएका हुन् । बागमती प्रदेशको दक्षिणी ललितपुर र काभ्रेको डाँडापारि क्षेत्रमा टेलीफोनको पहुँच नपुग्दा समस्या भएका बताईएको छ । टेलीफोनबाट बन्चित हुँदा त्यहाँका पालिकाका प्रशासनमा समेत आधुनिक सञ्चार सेवा पुग्न नसकेको गाउँपालिका महासङ्घले जनाएको छ ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालले टेलीफोन टावर नभएका स्थानहरुमा इन्टरनेट र टेलिफोनको पहुँच नपुगेकोले छिटो टेलीफोनको टावर राख्नु पर्नेमा जोड दिएकोे छ। ती गाउँपालिकाको आसपासको बस्तीलाई समेत सेवा पुग्ने गरी नेपाल टेलिकमको टावर स्थापना गर्नु अति आवश्यक भएको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले बताए ।